भारतमा पद्म श्री पुरस्कारको दृश्य : यहाँ केहि सिक्ने कि ? - Mero Tribune
Home ON POINT भारतमा पद्म श्री पुरस्कारको दृश्य : यहाँ केहि सिक्ने कि ?
भारतमा पद्म श्री पुरस्कारको दृश्य : यहाँ केहि सिक्ने कि ?
अहिलेको हट र भाइरल टपिक हो -‘भारत सरकारले बाँडेको पद्मश्री पुरस्कार’ ।
यसको कारण हो -राष्ट्रपति कार्यालयमा पद्मश्री थाप्न जानेहरू भुइँमान्छे थिए । उनीहरु खाली खुट्टा नै पुरस्कार ग्रहण गएका थिए । उनीहरुको पहिरन भन्दा पनि काम ठुलो थियो । न त उनीहरु कुनै ठुलाबडा थिए न त पार्टिको कुनै कार्यकर्ता । उनीहरुको एउटा मात्र बिशेषता थियो र त्यो हो उनीहरुको निष्फिक्री काम समाजप्रती ।
६५ वर्षीय सुन्तला व्यापारी हरेकाला हजाब्बा र ७७ वर्षीया आदिवासी महिला तुलसी गौडा खाली खुट्टामै राष्ट्रपति कार्यालय गएका थिए। पर्यावरणको सुरक्षामा दिएको योगदानका लागि तुलसीलाई पद्मश्री पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको थियो।उनले १२ वर्षको उमेरदेखि नै बिरूवा रोप्न थालेकी थिइन्।
त्यस्तै अर्का ६५ वर्षीय सुन्तला व्यापारी हरेकाला हजाब्बाले आफ्नो कमाइबाट दक्षिण कन्नाडाको न्युपादुपु गाउँका गरिब बालबालिकाहरूलाई पढाउन मद्दत गरेका थिए।यस्तै यसपाली थुप्रै भुइमान्छेले भारतमा अवार्ड पाए ।
अब कुरा गरौं नेपालको ।नेपालमा हरेक वर्ष संविधान दिवसको दिन पारेर सरकारले विभिन्न पदवी र तक्मा पाउने नामवाली सार्वजनिक गर्छ।तर त्यो विवाद रहित हुँदैन ।त्यो पाउनेमा नेताका कार्यकर्तादेखी कालोसूचीमा परेका ठेकेदार समेत पर्ने गर्छन् । यस्ता भुइँमान्छेले अवार्ड पाएको बिरलै सुन्न पाइन्छ । त्यसैले त कत्तिले त यो पुरस्कार बहिस्कार गर्छन् । नेपाल मा पनि राम्रो र महान काम गर्ने धेरै भुइँमान्छे धेरै छन् तर उनीहरु बिरलै सम्मनित हुन्छन् । सरकारले पनि यस्ता मान्छेको पहिचान गरी पुरस्कृत गर्नुपर्छ ।
Previous articleKangana Ranaut Receives Padma Shri Award
Next articleEmissions by Global Meat and Dairy Companies